Fanofanana: mpanao asa tanana ireo mpanao mofo
Par Taratra sur 23/02/2021 Economie, NS Malagasy
Nitohy tany Manakara ny fanofanana ireo mpanao mofo, anatin’ny fanofanana nomen’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana (Mica) ary ny FMFP*. Anisan’ny mpanao asa tanana ireo mpamadika vokatry ny fambolena. 85 izy ireo nanaraka izany fiofanana tany amin’ny distrikan’i Manakara ka 65 nampiana tamin’ny fahazoana karatra maha matihanina. Naharitra roa herinandro ny fanofanana […]
Koperativa Taratra Artisanat Malagasy (Kotarma), hita any amin’ny faritra maromaro : Amoron’i Mania, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony miezaka ho matihanina amin’ity sehatra iray ity. Efa nisy mpikambana ao amin’io koperativa io nanaraka fiofanana teto Antananarivo. Ahoana marina ny tontolon’ny asa tanana eto Madagasikara ? Ho famantarana ara-dalàna ny mpanao asa tanana, nanaovana antontanisa mazava ny momba azy […]
Teny malagasy: maro ny tokony hahitsy
Par Taratra sur 23/02/2021 Divers, NS Malagasy
Tsy misy afaka mihambo fa mahafehy tanteraka ny teny malagasy. Na izany aza, efa misy ny voka-pikarohana na valim-pikarohana azo ampiasaina tsara mba tsy handiso. Maro amin’izy ireny no narafitra ho fitsipika hoenti-manoratra. Tokony hampiasaina izy ireny fa tsy ho tazanim-potsiny. Mbola olana anefa ny tsy fahampian’ny fanapariahana azy ireny. Firy amin’ny tokantrano malagasy, ohatra, […]
Faritra Diana, Sofia, Sava: hikija ny orana noho ilay tangoron-drahona matevina
Hanomboka rahampitso, hisitraka oram-baratra matetika ny amin’ny afovoan-tany, raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby. Voakasik’izany ny eto Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania ary Matsiatra Ambony. Mitohy ny fanaraha-maso akaiky ny faritra andro ratsy ao avaratry ny Nosy. Mety hivadika rivodoza izy any amin’ny faran’ny herinandro, raha ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetr’andro hatrany. Mitondra orana […]
Par Taratra sur 23/02/2021 NS Malagasy, NS-Culture
Ankoatra ny tohana mivantana entin’ny Fonds d’intervention pour le développement (Fid) ho an’ny vondron’olona marefo amin’ny tetikasa “Asa avotra mirindra”, “Fiavota”, “Vatsin’Ankohonana” ary “Ndao hianatra” sy ny maro hafa, hahazo fanofanana momba ny asa koa ireo mpisitraka ahafahany manana fidiram-bola maharitra, hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Fida, Razanadrainiarison Rondro, omaly teny Mahazoarivo. 20 andro ny faharetan’ny […]
Soratononina 2020: notolorana loka ny 10 voalohany
Tontosa ny zoma 19 febroary, maraina ny hetsika fankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny teny ibeazana teny amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza. Nampitondraina ny lohahevitra “Ampiroboroboina ny fimaroanteny ho fampiatiana ao amin’ny tontolon’ny fanabeazana sy fiarahamonina” izay novelabelarin’ny profesora Irène Rabenoro, mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia. Tao anatin’izany ihany koa, notolorana loka toy ny boky maro […]
Toamasina: « Mpanao hadisoana miverimberina ny filohan’ny oniversite »
Nitondra fanazavana sy porofo momba ny olan’ny vatsim-pianarana tany amin’ny oniversiten’i Toamasina ny minisiteran’ny Fampianarana ambony. « Mpanao hadisoana matetika miverimberina ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina », hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Randriamasitiana Gil Dany, nandritra ny fanazavana momba ny olan’ny oniversiten’i Toamasina, omaly teny Fiadanana. Rehefa zohina ny zava-misy rehetra, misy […]
Kaominina Manandriana: niaro ny tontolo iainanana sy nifanabe ny Sonita
Namboly zana-kazo miisa 7 000 teny Ambohimanampana, kaominina Manandriana, Avaradrano ireo avy amin’ny mpino silamo Sonita eto Antananarivo, ny alahady teo. Maherin’ny 600 eo izy ireo, ahitana tanora sy lehibe ary ankizy izany avy amin’ny “Mosquée” sy fikambanana ary ivontoeram-panabeazana silamo eto an-drenivohitra. Nitarika izany ireo raiamandreny am-panahy. Tafiditra amin’ny adidy ho an’ny firenena izany sady […]
Ravololomanana Lalatiana – CUA: « Misy ny ezaka fanadiovana sy fanovana eto »
Nitondra ny heviny sy ny fahitany ny fitantanana eo anivon’ny CUA ny mpanolotsaina, Ravololomanan Lalatiana, ny herinandro teo. « Misy ny ezaka amin’ny fanadiovana sy ny fanovana eo anivon’ny kaominina », hoy izy. Nambarany fa efa nanomboka tao anatiny izany satria niaina fahalovana tao anatin’ny taona maro ny CUA. Niseho tamin’ny endrika maro izany, niampy ny tambajotra hatramin’izay. […]
Sendikan’ny Croua: « Takinay ny karama roa volana mahery…. »
Par Taratra sur 23/02/2021 NS Malagasy, NS-Politique
« Mijoro izahay mitaky ny zonay. Roa volana mahery tsy nandray karama na efa notakina sy nanaovana ny dingana rehetra aza izany teny anivon’ny ministeran’ny Fampianarana ambony”, hoy ny avy amin’ny sendikan’ny mpitantana ny toeram-pononenan’ny mpianatra (Croua), Andriantsitohaina Tefy, teny Ankatso, omaly. Efa nisy tompon’andraikitra nandray ny solontenan’izy ireo ary nambara fa efa an-dalam-pikarakarana… Efa nametraka […]
Anisan’ny nandray anjara, nandaha-teny tamin’ny Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny toekarena ho an’i Afrika manoloana ny covid-19 ny filoha Rajoelina Andry. Notanterahina tamin’ny alalan’ny viseo-conference izany. Navoitran’ny filoha tamin’izany fa tonga izao ny fotoana hampisandratana an’i Afrika ka niantsoany ny fiaraha-miasa sy fifampiresahana matotra eo amin’ny samy Afrikanina. “Hoporofointsika ny firaisantsika hina sy ny fitiavan-tanindrazana anantsika […]
“Fihazonana zava-mahadomelina sy faniratsirana…”: nahazo sazy mihantona telo volana i Francesca, zanak’i Me Hanitra
Niakatra ny fampanoavana tetsy Anosy ary niatrika fitsarana avy hatrany ny zanaky ny depiote Razafimanantsoa Hanitra, i Me Razafimahefa Francesca, omaly. Nilatsaka ny didy ka mandoa lamandy 50 000 Ar noho ny fihazonana zava-mahadomelina sy sazy mihantona telo volana noho ny faniratsirana mpitandro filaminana ny tenany. “Misaotra ny Holafitry ny mpisolovava sy ny mpisolovava rehetra. […]
Sao lasa fomba fotsiny…
Par Taratra sur 23/02/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Maromaro ny hetsika fankalazana sy fahatsiarovana nomarihina tato ho ato. Teo, ohatra, ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Tenindreny, ny 21 febroary. Nanao izay ho afany ireo mpikarakara hahalavorary izany, ho an’ny eto Madagasikara. Mby aiza anefa ny fampiainana izany ny Malagasy tompon’ny teny? Zary fombafomba sisa ilay fanamarihana fa ny fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina, toa […]
Par Taratra sur 23/02/2021 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
“ Lonilony noho ny resaka ady tany”. Izay, araka ny voalaza, no nitarika ity vonoan’olona mahatsiravina, nitranga tao amin’ny fkt Vohimary, kaominina ambanivohitra Mahasoa, distrikan’i Betroka, afakomaly ity. Sivy mianaka no indray maty, kilan’ny afo nodoran’ny dahalo tamin’izany. Tokantrano iray, misy ankohonana sivy mianaka no indray nodoran’ny dahalo velona tao Benonoky, Fokontany Vohimary, Kaominina Ambanivohitra […]
Campus Oniversiten’i Toamasina: mbola tsy milamina ny raharaha
Mbola mandrimandry tsy milamina ny fiainan’ny mpianatra ao amin’ny campus Barikadimy Toamasina. Efa lasa nentina any an-tanindrazana ao amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ny razan’ilay mpianatra namoy ny ainy nandritra ny fifandonana teo amin’ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana. Etsy an-kilany, nidina an-dalambe ary tonga hatreny amin’ny sampanan-dalana Ankirihiry ireo vondron’ny mpianatra fa hoe hanakorontana ny […]
Andohanakoho-Antsirabe: tratra i Mamy, iray amin’ireo mpanakan-dalana
Par Taratra sur 23/02/2021 Faits Divers, NS Malagasy
Saron’ny zandary tao amin’ny tanànan’Andohanakoho, fokontany Ankirinomby Kaominina Vinanikarena distrika Antsirabe, afakomaly alina, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany ny lehilahy iray malaza amin’ny fanakanan-dalana. Teo am-panaovana ny asa ratsiny ity jiolahy ity no nisy nampandre ny mpitandro filaminana. Tratra tao anaty tatatra iray tao anatin’ny Fokontany Ankirinomby io, arak’izany, ny tenany. Mbola teny […]
Préfet de police, Jly Ravelonarivo Angelo: «Handraisana fepetra ny fandaharana Miara-Manonja…»
Hentitra ny teo anivon’ny Prefet de police tamin’ny alalan’ny Jly Ravelonarivo Angelo momba ny fandaharana Miara-Manonja. « Misy ny fepetra horaisana momba ny Miara-Manonja satria manohintohina ny filaminam-bahoaka ireo olona miteny ao. Tsy mbola holazainay kosa anefa ny fepetra horaisina amin’izy ireo », hoy izy nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nandritra ny fivorian’ireo tompon’andraikitra misahana […]
Soavinandriana-Itasy: olona enina sy rongony 17 fonosana indray tra-tehaka
Nifanenjehan’ny polisy nanao fisafoana ny lehilahy telo nampiahiahy tao Ambatomisihazo Soavinandriana, ny harivan’ny Alakamisy lasa teo. Tsy namelan’ny mpitandro filaminana raha tsy tratra izy telo ka nahatrarana rongony niisa fito fonosana. Taorian’ny fanadihadiana natao ireo mpidoroka zava-mahadomelina ireo, nanondro ny mpamatsy rongony tao an-toerana izy ireo. Vokany, voasambotra ny lehilahy iray fantatra tamin’ny anarana hoe […]
Nanao taratasim-bola tsy misy antoka: karohin’ny polisy i Thomas Vittil sy ny vadiny
Namoahan’ny polisy didy fikarohana ireto mpivady hita amin’ny sary ireto, izay mpitantana orinasa iray eto an-drenivohitra kanefa samy nanao taratasim-bola tsy misy antoka… Toy izao ny mombamomba azy mivady ireto, araka ny tatitra nampitain’ny polisy. Thomas Vittil, teraka tamin’ny 11 janoary 1972 tao Kerala Inde, asany : mpitantana ny Génesis – Co Gérant de la […]
Raha voaporofo ny andraikiny tamin’ny korontana: « Azo esorina ny mpitantana ny oniversiten’i Toamasina »
Par Taratra sur 22/02/2021 Divers, NS Malagasy
Mitaky fanadihadiana lalina ifotony sy fandraisana andraikitra avy amin’ny fitondrana mahefa ny mpampianatra mpikaroka Sampana Antananarivo ho an’ny olona niteraka ny korontana ka namoizana aina mpianatra tany Toamasina, hoy ny filohany, Ravelonirina Sammy Grégoire, omaly teny Ankatso. Raha voamarina sy voaporofo fa misy andraikitry ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina ny savorovoro niseho ny alakamisy lasa teo, […]
Tao anatin’ny herinandro: nandavo olona 5 ny valanaretina covid19
Fantatra nandritra ny tatitry ny CCO fa nahafaty olona dimy indray ny valanaretina Covid-19 tao anatin’ny herinandro (13 febroary 2021-19 febroary 2021). 2 tamin’ireo maty no teto Analamanga ary 2 hafa tany Diana. Iray kosa tany Matsiatra Ambony. Mitontaly 233 ireo trangan’aretina vaovao tao anatin’io herinandro io. 381 kosa ireo olona sitrana ary mbola misy […]
Toetr’andro: manambana ny rivodoza
Mampanahy ny mety hiforonan’ny rivodoza ao avaratra atsinanan’ny Nosy, araka ireo tangoron-drahona mitondra orana miaraka amin’ny rivotra manodidina ny 20 ka hatramin’ny 40km isan’ora. Arahi-maso akaiky, araka izany, ny fivoarany ary efa entanina sahady ny mponina ao amin’ny faritra Diana hanaraka akaiky ny vaovaon’ny toetr’andro hahafantarana ny fihomanana rehetra tokony hatao. Eysy an-daniny, mbola hanelingelina […]
Fanambaran’ny Governemanta: hohadihadina ny raharaha oniverisite Toamasina
Namoaka fanambarana ny governemanta mahakasika ny hetsika nahafaty mpianatra tany Toamasina. Voalaza amin’izany fa manameloka tanteraka amin’ny fomba hentitra ny fandrobana nisy, ny halatra teo anivon’ny oniversite ary ny herisetra niteraka fahasimbam-pananan’ny oniversite ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Nanamafy ny fanambrana fa efa voarain’ny oniveriste tamin’ny volana jolay 2020 ny vatsim-pianarana sy ny vatsim-pampitaovana. […]
Herinaratra: hampifandraisina ny tambajotra Toamasina sy Antananarivo
Par Taratra sur 22/02/2021 Economie, NS Malagasy
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 17 febroary teo, ny fampahafantarana ny fandefasana ny tolotra “Ring Tana 90 KV”, mikasika ny famokarana herinaratra. Hanamafisana ny tambajotra iraisan’Antananarivo (RIA) ity tetikasa ity, hitsinjarana ny herinaratra azo avy amin’ny angovo azo havaozina any Sahofika (Amoron’i Mania), Volobe (Toamasina), Ranomafana ary Mahitsy. Hampifandraisina ny herinaratra miainga any Toamasina, […]
Atsimo Atsinanana: asa tanana sy famokarana zanakazo
Mamokatra mampidi-bola amin’ny asa tanana sy ny zanakazo ny mponina ifotony any amin’ny kaominina roa Mahabo Mananarivo sy Manambotra Atsimo, any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana. Niova ny fomba fiasa! Tsy mijanona ho fiarovana ny tontolo iainana fotsiny no imasoan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy (Medd), fa manome lanja ny asa fihariana ho an’ny […]
« Précédent 1 … 3 4 5 6 7 … 1 591 Suivant »